मनसुनकै कारण नेपालमा यस वर्ष ठूलो मानवीय क्षति! हेर्नुस् – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > मनसुनकै कारण नेपालमा यस वर्ष ठूलो मानवीय क्षति! हेर्नुस्
admin October 7, 2020 जीवनशैली, समाचार	0
काठमाडौँ– नेपालमा मनसुनजन्य घटनाका कारण यसवर्ष दशककै सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति हुन पुगेको छ । कोरोना कहरका बीच आएको भारी वर्षासँगैको बाढी, पहिरो, डुबान र चट्याङले ठूलो मानवीय क्षति गराएको हो । गृहमन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार नेपालका ४९ जिल्ला प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित बन्न पुगे । कूल बाढी/पहिराका मात्रै ५८० घटना भए ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार कूल ५१४ घरमा क्षति पुगेको जनाइएको छ । सरकारले प्रभावितका लागि झण्डै रु सात करोड राहत वितरण गरेको छ । मुख्यगरी भेल पहिराले ठूलो क्षति पुर्‍याएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जानकारी दिए । पहिराले सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍यायो भने बाढीले बाग्लुङमा बढी क्षति गर्‍यो । सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा बढी ७२ को मृत्यु भएको छ भने ३९ अझै बेपत्ता छन् ।
गृहमन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट मुलुकका ४९ जिल्लामा ४०२ ले ज्यान गुमाएका छन्, १०१ जना बेपत्ता रहेका र ४४६ घाइते भएका छन् । प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार कूल ५१४ घर क्षति भएको जनाइएको छ ।
मुख्यगरी गत जेठ ३० बाट नेपालमा मनसुन सक्रिय भएको थियो । अधिकांश घटना मनसुन सक्रिय भएपछि नै भएका छन् । यसपाली यो समयमा औषतभन्दा धेरै वर्षा भएकाले पहिराका घटना बढेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।
जेठ ३० पछि अहिलेसम्म विपद्बाट ३६७ को मृत्यु भएको तथा १०० जना हराइरहेका तथ्याङ्क छ । कूल ३२४ जना घाइते भएका छन् । मनसुनपछिको पहिरामा परेर २९३ को मृत्यु, ६४ बेपत्ता र २२२ घाइते भए । बाढीबाट ३९ को मृत्यु, ३६ बेपत्ता र नौ घाइते भए । चट्याङबाट ३५ को मृत्यु र ९३ जना घाइते भएको विवरण छ ।
विपद् जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ कृष्ण देवकोटा पानीको निकासमा भएको अवरोध र वातावरणमैत्री विकास हुन नसक्नु नै विपद्जन्य घटनाको प्रमुख कारण रहेको बताउँछन् ।
वाग्मती प्रदेशका सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, दोलखा, मकवानपुर र काभ्रेपलाञ्चोकमा विपद्जन्य घटना भए ।
सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै ७१ जनाको मृत्यु भयो भने अझै ३८ जना बेपत्ता छन् । वाग्मती प्रदेशमा मात्रै ८५ जनाको मृत्यु, ४० बेपत्ता र १९ घाइते भए । कूल १३० बढी घरमा क्षति भएको प्राधिकरण प्रमुख पोखरेलले बताए ।
गण्डकी प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रमा पहिरो गएर क्षति पुर्‍याएको छ । उक्त प्रदेशका पर्वत, कास्की, गोरखा, तनहुँ, म्याग्दी, नवलपुर, स्याङ्जा, लमजुङ, बाग्लुङ र मुस्ताङमा क्षति पुगेको छ ।
गण्डकीको सबैभन्दा बढी बाग्लुङमा ३४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने अझै १७ जना हराइरहेका छन् । त्यसपछि म्याग्दीमा ३१ जनाको मृत्यु भएको छ । उक्त प्रदेशमा कूल १२२ जनाले ज्यान गुमाए ।
अझै २४ जना हराइरहेका छन् भने ५७ जना घाइते भए । त्यहाँ कूल १८४ घरमा क्षति पुगेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, गुल्मी, रोल्पा, प्यूठानमा गरेर ३२ जनाको मृत्यु, दुई बेपत्ता र १९ जना घाइते भएका छन् । कूल १२ घरमा क्षति पुगेको जनाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा दैलेख, जाजरकोट, सुर्खेत, सल्यान, रुकुमपश्चिम, डोल्पा र कालिकोटमा विपद्जन्य घटना भएका छन् । उक्त प्रदेशमा कूल ५९ ले ज्यान गुमाएका छन् । अझै १२ बेपत्ता रहेका र ३२ जना घाइते भएका छन् । कूल ३८ घरमा क्षति पुगेको जनाइएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भौतिक क्षतिको विवरण अझै धेरै रहेको बताउँदै अध्यावधिक गर्न निर्देशन दिए । गृहमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन १५ दिनको समयसीमासमेत दिएको छ ।
नेपालमा आज पनि यति धेरले जिते कोरोना!